Nchịkwa Ọrụ Task dị ka Ọrụ
Izu ole na ole gara aga, ana m agbasi mbọ ike ijide. Enwere m ma ọ dịkarịa ala otu ọrụ iri na abụọ, ma ọ dịkarịa ala ụlọ ọrụ mmekọ 5, onye ọrụ oge niile na ihe onwunwe oge 2. Ana m agbalị ịnọgide na-ere yana imezu oru m rere. Anyị na na na iru ala ebe anyị na-ezuru azụmahịa ọzọ ozi oge employee ma anyị enweghị na akụ ma (ọ na-amalite n'ime izu abụọ!).
Iji hazie onwe m, azụrụ m ihe ọnwa ole na ole gara aga. Ọ bụ ngwa njikwa ọrụ dị mfe maka Mac nke jikọtara na kalenda m. Ọ bụ sọftụwia dị ịtụnanya ma nyeere m aka ịmepụta backlog ma gaa n'ihu na-ebute ọrụ m ụzọ.
Otú ọ dị, nsogbu bụ na ọ dị mma maka my ọrụ. Ọtụtụ n'ime ọrụ m na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-achọ ọtụtụ ndị otu egwuregwu ka ha mezuo ọtụtụ ọrụ n'otu ọrụ. Achọghị m sọftụwia njikwa njikwa - nke gaara agabiga oke. Naanị m chọrọ ngwa dị mfe ebe enwere ike ịnye ọrụ, enwere ike ịlele ọrụ niile, wee nwee ike ịdebe ọrụ edechara.
O were obere oge, mana achọtara m sọftụwia zuru oke dịka azịza ọrụ, HiTask.
HiTask na-enye m ohere ịkọwapụta, lelee ọrụ site na mkpa, ụbọchị, ọrụ, ma ọ bụ onye nwe ya. M nwere ike ịkpado ọrụ ọ bụla na ọbụna nyochaa ndepụta ọrụ ozugbo. Nke kachasị mma, akaụntụ azụmaahịa bụ naanị $ 15 kwa ọnwa ma nye gị ohere iji subdomain ejiri, akara ngosi gị, nwee nkwado elekere 24 na ikike ịkekọrịta ọrụ na ọrụ gị.
Naanị m chọrọ maka HiTask? Ngwa Droid (ha nwere ngwa iPhone ugbua). Maka $ 15 otu ọnwa, agbanyeghị, nke a bụ otu usoro usoro!
Tags: igwe adogbako networkinyeNdiaguemail azumchọta ogbakoMyspaceAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yaọrụ data zoominfo
Jul 1, 2010 na 4: 25 AM
Onye ọ bụla ndụmọdụ gị tụkwasịrị obi nke m sooro niile na-eti otu ihe…
Ọzọ ekele maka isi gị na nke a, Doug. M debanyere aha! 😛
Jul 15, 2010 na 1:42 PM
Mara mma web imewe na HiTask. Emechara m enyochaghachi ọrụ m / njikwa ọrụ m wee si na mpempe akwụkwọ (maka ọrụ) + ChetaTheMilk gaa ọtụtụhttp://www.manymoon.com).
ỌtụtụMoon bụ n'efu (ọrụ na-akparaghị ókè) ma jikọta ya na ngwa Google ozugbo. Echere m na ọ ga-edobe m na egwu.
Ọ bụ ezie na interface ahụ abịawo ogologo oge, m ka na-atụ uche hotkey RTM m ma chọọ ịkọ akụkọ, mana ihe ndị a bụ ihe m nwere ike ide na Greasemonkey scripts maka. 😛
Apr 16, 2012 na 9: 23 AM
Amalitere m na HiTask na ha jiri nwayọ wee kwaga Comindware sistemụ njikwa ọrụ nke a haziri nke ọma ma ọ na-echekwa oge karịa maka gị ka ị nwere ike ịrụ ọrụ n'otu otu wee hụ otu ndị otu ndị otu na-arụ ọrụ yana otu ha si emezu oge. Ma e wezụga na ị nwere ike itinye docs na sistemụ ma rụọ ọrụ na Outlook.